ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - ကျွန်ုပ်သည် Mac မှဖြစ်သည် ကျွန်ုပ်သည် Mac မှ (စာမျက်နှာ ၄)
i-FlashDrive HD၊ သင်၏ Mac နှင့် iOS ကိရိယာအကြားဖိုင်များကိုကူးပြောင်းရန်မှတ်ဉာဏ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာမှဖိုင်များကို iOS ထုတ်ကုန်များသို့လွှဲပြောင်းရန်ပြင်ပမှတ်ဉာဏ်ဖြစ်သော PhotoFast i-FlashDrive HD
၁၃ လက်မ MacBook Air / Pro ကိုသယ်ဆောင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသော Techair ပခုံးအိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့စမ်းသပ်ခဲ့တယ်
Techair ပခုံးကြိုးသည်လက်တော့များကို ၁၃ လက်မအထိသယ်ဆောင်ရန်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီး MacBook Air / Pro အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
သင်၏ကြွက်သည်အလုပ်မလုပ်တော့သည့်အတွက်လိုက်နာရမည့်အဆင့်များအကြောင်းကိုသင်တို့အားပြသမည်။ လျှောက်လွှာများ၊ စနစ်များမှသည်မောက်စ်ကိုစစ်ဆေးလိမ့်မည်။
Mac Pro သစ်အတွက်ဒီဇိုင်းသစ် optical drive အသစ်တစ်ခု
Logitech သည် Z600 Bluetooth Speaker များကိုလှပသောဒီဇိုင်းဖြင့်ကြေငြာခဲ့သည်
Logitech သည် Z600 စပီကာများကို Bluetooth ဆက်သွယ်မှုနှင့် Mac line နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောဒီဇိုင်းကိုစတင်မိတ်ဆက်လိုက်သည်
Snuglet သည် Kickstarter တွင်ပေါ်လာပြီးသင်၏ MagSafe2ကိုလုံခြုံစေသည်
နောက်ထပ် Kickstarter စီမံကိန်းတစ်ခုပေါ်လာသည်။ ယခုတကြိမ်တွင်သင်ကသင်၏ MagSafe2ကို "ဖြန့်ချိ" ခြင်းမှတားဆီးပေးသော Snuglet တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Kickstarter on The Roost သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ MacBook အတွက် 'ရပ်တည်ခြင်း' ဖြစ်သည်
MagCozy, Kickstarter တွင် MagSafe2converter ချိတ်ဆက်မှုအသစ်
Satechi မှအလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော 7-port USB 3.0 hub
အလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော USB7port ၇ ခုနှင့်ဗားရှင်းနှစ်မျိုးဖြင့်ခေတ်မီသောအချက်အချာဖြစ်သည်
သင်၏ MacBook ကိုယခုလျှော့ထားသော Slickwraps ဖြင့်ဝတ်ဆင်ပါ
Logitech Solar Keyboard K760 သည်ကိရိယာ ၃ ခုနှင့်တွဲပြီးဘက်ထရီများကိုမေ့သွားသည်
Logitech Solar Keyboard K760 သည် Bluetooth အတွက်သုံးကိရိယာများနှင့် တွဲဖက်၍ အလင်းစွမ်းအင်ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည့် Mac အတွက်ကီးဘုတ်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့ Mac အတွက် Logitech T651 multi-touch trackpad ကိုစမ်းသပ်ခဲ့တယ်
Logitech T651 multi-touch trackpad ကိုမျက်နှာပြင်အကျယ်USBရိယာကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့် USB အားသွင်းခြင်းဖြင့်ဘက်ထရီသက်ရောက်စေနိုင်သည့် Mac အတွက် multi-touch trackpad ကိုသုံးသပ်ခြင်း
Stashboard သည်သင်၏ iMac အရံပစ္စည်းများကိုစီစစ်နိုင်ရန်ကူညီသည်
Polycarbonate သည်ရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းပါရှိပြီးသင့် iMac အသစ်ကိုနေရာချသည့်စားပွဲခုံကိုစီစဉ်ပေးသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် miniStack Max ကိုစမ်းသပ်ပြီးအမြန်နှုန်းနှင့်နိဂုံးချုပ်ခြင်းများ (နှင့် II)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်မှုရဲ့ဒုတိယအပိုင်းကတော့ Mac အတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်
ကျနော်တို့ miniStack Max စမ်းသပ်ပြီး: ပထမ ဦး ဆုံးစှဲနှင့်စည်းဝေးပွဲကို (I)
ကျွန်ုပ်တို့သည် Newertech miniStack Max ကိုစမ်းသပ်သည်
Thunderbolt ဆက်သွယ်မှုဖြင့်နောက်ထပ်အနာဂတ်အခြေစိုက်စခန်း CalDigit
Magic Trackpad တွင်အမူအယာများ
OSX အတွင်းရှိ Magic Trackpad ကိုအသုံးပြုနေစဉ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အမူအယာများမပါဘဲလုပ်ဆောင်။ မရနိုင်သောလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်။
EVGA က၎င်း၏ GTX 680 Mac Edition ဂရပ်ဖစ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ MacBook အတွက် Aluminium အခြေပြု AluBase
၂၀၁၂ iMac များသည် Apple Remote နှင့်မကိုက်ညီပါ
Apple Remote သည် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော iMac နှင့်မကိုက်ညီပါ။ Retina Display ပါသည့် MacBook Pro နှင့်လည်းအဆင်မပြေပါ။
Mac Pro အတွက် Sapphire HD 7950 အသစ်ကိုယခုရရှိနိုင်ပါပြီ
VESA အသစ် iMac သည်နံရံပေါ်ချိတ်ဆွဲထားသည်
VESA သည် Apple Store တွင်ရှိပြီးဖြစ်သော adapter ကြောင့် iMac အသစ်ကိုယခုနံရံပေါ်ချိတ်ဆွဲထားနိုင်သည်
MacDock Pro သည် MacBook Pro အတွက်ဆက်သွယ်မှုများစွာပါသော dock ဖြစ်သည်
MacDock Pro သည် MacBook Pro အသုံးပြုသူများအတွက်ရရှိနိုင်သောဆက်သွယ်မှုများတိုးချဲ့ရန်အတွက် Kickstarter စီမံကိန်းဖြစ်သည်။
Mac Pro အတွက် Radeon ဂရပ်ဖစ်ကဒ်အသစ်
Belkin Thunderbolt Express Dock၊ Thunderbolt တစ်ခုနှင့်ဆက်သွယ်မှု ၈ ခု
Belkin သည်တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် Thunderbolt တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအနေနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဆက်သွယ်မှု (၈) ခုပါ ၀ င်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းကို၎င်း၏တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်။
Ergotron, Mac အတွက်သူ့ရဲ့ဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေကိုအာရုံစိုက်ပါ
Ergotron သည် Mac ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုအဓိကထားပြီး Macworld တွင်ပြသထားသောရှေ့ပြေးပုံစံအသစ်ကိုဖန်တီးသည်
Kanex ကသင်၏ USB 3.0 port သုံးခုနှင့် Ethernet တစ်ခုကိုထည့်သွင်းထားသည်
Kanex က MacBook တွင် USB 3.0 port အရေအတွက်တိုးချဲ့ရန်အဆိုပြုထားသည်
ClamCase Pro သည်သင်၏ iPad ကို MacBook အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်
ClamCase Pro သည်အိုင်ပက်၏အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောအရာဖြစ်ပြီး bluetooth keyboard ပါ ၀ င်ပြီးအလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး Apple tablet ကို MacBook အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသည်။
iPen 2, iPad နှင့် iMac ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ရေးရန်ရေးတံတား
iPen2သည်ဖိအားကိုခံနိုင်သည့်ခံတံတစ်ခုဖြစ်ပြီး iPad, iMac နှင့် Apple Cinema Display များတွင်ကင်မရာများပါရှိသည်။
ပထမဆုံး fiberb optic Thunderbolt ကေဘယ်လ်များပေါ်လာမည်
ပထမဆုံးသော Thunderbolt ဖိုင်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်များသည်ဈေးကွက်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်
NewerTech သည် Mac mini အတွက်လှပသောရပ်တည်မှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်သည်
Mac mini သည်မည်သည့် desktop ပေါ်တွင်မဆိုအရွယ်အစားသေးငယ်သောကြောင့်ကောင်းမွန်သောကွန်ပျူတာဖြစ်သည်။
သင်၏ MacBook Air ကိုကာကွယ်ရန် Fu-Design အမှုကိစ္စများ
သင်၏ MacBook Air ကိုကာကွယ်ရန်သားရေအိတ်များ
Mobility Lab Hub Cylinder ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ခဲ့တယ်
Mobility Lab Cylinder Hub သည် Apple ၏ဗေဒနှင့်အလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော USB Hub ဖြစ်ပြီး USB 2.0 port လေးခုပါရှိသည်။
Logitech မှ၎င်း၏ကြိုးမဲ့နေရောင်ခြည်သုံးကီးဘုတ်ကို Bluetooth ဖြင့်ကြေငြာခဲ့သည်
Logitech Solar Keyboard K750 သည် Mac နှင့် iOS ထုတ်ကုန်များအတွက်ကြိုးမဲ့ Bluetooth keyboard ဖြစ်ပြီးနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဘက်ထရီမလိုအပ်ပါ။
သင်နှင့်အတူအမြဲသယ်ဆောင်ရန် USB မှတ်ဉာဏ်ရွေးချယ်ခြင်း
သင်၏အရေးကြီးဆုံးဒေတာနှင့်သင်အမြဲသယ်ဆောင်နိုင်သောသင်၏ကွန်ပျူတာအတွက်စျေးပေါသော USB ချောင်းများရွေးချယ်ခြင်း 8GB မှ 32GB အထိရှိသည်
သင့် iPhone နှင့်အားကစားလုပ်ရန်ကိစ္စရပ်များရွေးချယ်ခြင်း
သင်၏စည်းကမ်းပေါ် မူတည်၍ သင်၏ iPhone နှင့်အားကစားလုပ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးအဖုံးများရွေးချယ်ခြင်း။ ပိုပြီးဘက်ထရီ၊ ထိတ်လန့်မှုနှင့်ရေကိုကာကွယ်ခြင်း။
Kanex က Apple TV အတွက် ATV Pro adapter ကိုထုတ်လုပ်လိုက်သည်
Kanex သည် Apple TV အတွက် ATV Pro HDMI သို့ VGA adapter ကိုလွှတ်တင်လိုက်သည်။ ဤသည်မှာ VGA output ပါသည့်ပရိုဂျက်တာတစ်ခုတွင် AirPlay Mirroring ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရန်စီမံခြင်းဖြစ်သည်။
OWC သည် Mac Mini 2011 တွင် hard drive နှစ်ခုတပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ကိရိယာတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်
OWC သည် ၂၀၁၁ Mac Mini တွင်ဒုတိယ ၄ င်းဟက်ဒရိုက်ကိုဒေါ်လာ ၄၉.၉၉ ဖြင့်တပ်ဆင်ရန်ခွင့်ပြုသည့်ကိရိယာတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။ သင်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးပါဝင်သည်။
Manhattan Stealth သည် multi-touch buttonless mouse ကို Magic Mouse နှင့်အစားထိုးသည်
Manhattan Stealth၊ ခလုတ်မပါသော Multi-touch mouse ကို OS X တွင် Magic Mouse အစားထိုးအသုံးပြုသည်။
သင်ခန်းစာ - iPad ပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်သင်၏ iMac ကီးဘုတ်ကိုသတ်မှတ်ပါ
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၌ iMac ၌၎င်း၏ကြိုးမဲ့ကီးဘုတ်ပါ ၀ င်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ iPad တွင်ပိုမိုအဆင်ပြေစွာရေးသားနိုင်ရန်၎င်းကိုအသုံးပြုလိုပါက ...
TILT, သင်၏ 15″ MacBook Pro ကိုအေးမြစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်
Apple Magic Mouse နှင့်ကီးဘုတ်အားသွင်းခြင်းဖြင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
Kanex iAdapt V2 ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Mac အတွက် Mini DisplayPort to HDMI Adapter
သင့် MacBook အတွက်ကြွက်များရွေးချယ်ခြင်း
သင်၏လက်ရှိ Mac တွင်အလွန်ကောင်းမွန်မည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်သုံးသပ်ပါသည်။
Belkin ကသူ့ရဲ့ Thunderbolt-based dock ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တယ်
Belkin သည် CES 2012 တွင် Dbolbolt ဆက်သွယ်မှုကို အခြေခံ၍ ၎င်း၏သစ်ဆိပ်သစ်ကိုတင်ပြခဲ့ပြီးသူ၏စီးပွားဖြစ်အမည်မှာ ...
Power Bar သည် Magic Trackpad အတွက် Mobee မှနောက်ဆုံးပေါ်ဖြစ်သည်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Magic Charger၊ Mobee ထုတ်ကုန်ကြီး၊ ယခုတင်ပြနေသောအမှတ်တံဆိပ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
Hitachi မှ Mac အတွက် hard drive အသစ်များ
နည်းပညာပိုင်းအရပြင်ပ hard drive အားလုံးသည် Mac နှင့်သဟဇာတဖြစ်သင့်သော်လည်းများစွာသောအမှတ်တံဆိပ်များသည်လိုင်းတစ်ခုထားလိုကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ desktop Mac အတွက်ကြွက်များရွေးချယ်ခြင်း
mouse ကို ၀ ယ်တဲ့အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် input device တစ်ခုဖြစ်တယ်။ အတော်များများ ...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mac အတွက်စပီကာရွေးချယ်ရေး
Mac standard မှလာသည့်စပီကာများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့၏အရည်အသွေး (အထူးသဖြင့် MacBook များ) အတွက်ထူးခြားမှုမရှိပါ။
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Magic Charger၊ Magic Mouse နှင့်ပြည့်စုံကောင်းမွန်သောအပိုတစ်ခုဖြစ်သည်
ကျနော်တို့ Apple ဘက်ထရီအားသွင်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်
Santa Claus သည်ကောင်းမွန်ပြီးကျွန်ုပ်၏ကီးဘုတ်အတွက်အားပြန်သွင်းနိုင်သည့်ဘက်ထရီအသစ်များအတွက်ကျွန်ုပ်၏ဆန္ဒကိုနားထောင်ခဲ့သည်။
သင်၏ Mac စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ပြင်ပ hard drive များ
ဖြစ်နိုင်သည်မှာသင်၏ Mac ၏ hard drive ၏စွမ်းရည်သည်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်ပျောက်ကွယ်သွားတော့မည်။
Willow and Company - ၀ တ်စုံနှင့်သားရေအဖုံးများ (စာဖတ်သူများအတွက် ၁၅% လျှော့စျေး)
Christa Sievers သည် Willow and Company ဟုခေါ်သော Etsy ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဖွင့်လှစ်။ သူမ၏ ၃ မီလီမီတာဂျာမန်ခံစားမှုအဖုံးများကိုရောင်းချသည်။ နှင့်အသားအရေ ...
ပြန်လည်သုံးသပ်ချက် - BookArc၊ သင်၏ MacBook Pro အတွက်အံ့သြဖွယ်ရပ်တည်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်သည် MacBook ကို desktop ကွန်ပျူတာအဖြစ်အသုံးပြုသောသူများအနက်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
MacBook Air အတွက်ဖြစ်ရပ်များရွေးချယ်ခြင်း
MacBook Air သည်ယနေ့အက်ပဲလ်၏ထင်ရှားသောလက်တော့ပ်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူမှု၊
သင့် iPod Nano ကိုနာရီတစ်လုံးအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည့်တတ်နိုင်သည့်လက်ကောက်များရွေးချယ်ခြင်း
iPod Nano သည်၎င်း၏အရွယ်အစားသေးငယ်မှုကြောင့်နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် ...
ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ Apple logo ရဲ့ထူးခြားတဲ့အရည်အသွေးနဲ့မူလအရည်အသွေးမြင့်သော့ချိတ်တစ်ခုပိုင်ရှင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ...
ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Ziron ကျပန်းပခုံးလွယ်အိတ်၊ သင် MacBook Air / Pro ကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာယူရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ Mac ကိုအတန်းသို့တက်ရန်သို့မဟုတ်အလုပ်ခွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သင်ကျောပိုးအိတ်သို့မဟုတ် ...
Mac ဆန့်ကျင်ရေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (၈) - iHub
USB hub ကို ဆက်၍ အသုံးပြုသည်။ ယခုအရာတစ်ခုအဖို့ Macs နှင့်အသင့်တော်ဆုံးသောအလှည့်သည်ဖြစ်နိုင်သည်။
Mac ပCိပက္ခဆန့်ကျင်ရေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (၆) - MacBook များအတွက် Heatink
MacBook (Air or Pro) ကိုသုံးသောအခါပုံမှန်အတိုင်းအောက်ခြေကအရမ်းပူလာတယ်။
သင်၏ Mac ကိုလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်ဖြင့်ဝတ်ပါ
ငါတွေ့ခဲ့ဖူးသမျှ MacBook Air အတွက်အလှပဆုံးလက် ၀ ယ်ကိုငါ့အတွက်ဝယ်လိုက်သည်။ ...
Mac ပCိပက္ခဆန့်ကျင်ရေးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (V): MacBook Air / Pro 13 အတွက်အဖုံးများ
MacBook Air သို့မဟုတ် Pro ရှိခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိခြင်းသည်မီးနှင့်ကစားနေသည်။
မကြာမီ iMac တွင်ကိုယ်ပိုင် iCarbons ရှိလိမ့်မည်
iCarbons များသည်အရည်အသွေးမြင့်ဗီနိုင်းများဖြစ်ပြီးကာဗွန်၏အပြင်ပန်းအသွင်အပြင်ကိုတုပပြီး ...
Thunderbolt ပါသည့် MacBook Pro သည် cable တစ်ခုတည်းတွင် external monitor နှစ်ခုကိုထောက်ပံ့သည်
Thunderbolt ကေဘယ်လ်သည်နောက်ဆုံးပေါ် Mac များ၌သာလာသည်နှင့်အမျှလက်ရှိတွင်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားမှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။
OptiBay ကိုကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန် (II) တပ်ဆင်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းအပိုင်း ၁
မနေ့က OptiBay ကိုတင်ပြပြီးနောက်ယနေ့ OptiBay ၏ပျော်စရာနေ့သည် ...
iHub 2: Apple စတိုင်ဖြင့် USB Hub ဖြစ်သည်
iMac ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့အရာတွေထဲကတစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့ USB ports တွေကို ၀ င်ဖို့ပါ။
Mobee Magic Charger - Bluetooth ကြိုးမဲ့ကီးဘုတ်နှင့် Magic Trackpad တို့အတွက်အားသွင်းအားသွင်းစက်
Magic Wand၊ သင်၏ Magic Trackpad ကိုကီးဘုတ်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ
TwelveSouth Magic Wand သည် Magic Trackpad ကို Apple ကြိုးမဲ့ကီးဘုတ်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ကြောင်း Atrack ဆင်တူတစ်ခုခု ...
iWatchz: iPod Nano ကိုနာရီအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသောသိုင်းကြိုးကို Apple Store တွင်ရနိုင်သည်
iWatchz nanoclipz သည်သင်၏ ၆ ကြိမ်မြောက် iPod nano ထဲသို့ထည့်သွင်းထားသောကလစ်ကိုအသုံးပြုသည့်သီးသန့်ပူးတွဲမှုစနစ်ဖြစ်သည်။
အပြည့်စုံဆုံးစပီကာများ Bowers & Wilkins MM1
Bowers & Wilkins MM1 သည် USB port မှတဆင့်အလုပ်လုပ်သော 2.0 အသံနှင့်ပါ ၀ င်သည့်စပီကာနှစ်လုံးဖြစ်သည်။ အပြင်ပန်း၏ ...
LaCie သည် Slim Blu-ray burner အသစ်ကိုစတင်ခဲ့သည်
သိုလှောင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာအထူးကုပြင်သစ်ကုမ္ပဏီ Lacie သည်ပြင်ပ Blu-ray အသံဖမ်းစက်အသစ်တစ်ခုကိုလွှင့်တင်ခဲ့သည်။
Axisotic သည် 3D modeling အစီအစဉ်များအတွက်စက်လုံးဆိုင်ရာ 3D mouse တစ်ခုဖြစ်သည်
3D ပရိုဂရမ်များအတွက်ကြွက်များ၏ရှေ့ပြေးပုံစံအများအပြားရှိခဲ့သည်။ အလှည့်အပြောင်းများနှင့်အနေအထားကွဲပြားမှုများ၏စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုမှု ...
သင့်ကွန်ပျူတာကို HD TV တစ်ခုအဖြစ်မည်သို့ပြောင်းလဲမည်၊ ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ
Jivo Element များဂေဟစနစ်နားကြပ်
ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော iPad, iPhone နှင့် iPod အတွက် Jivo Elements နားကြပ်။
သင်၏ Mac အတွက်သစ်သားလက်များပါ ၀ င်သည်
နေ့တိုင်း Mac ဆက်စပ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူအချို့ရောင်းချသောအရူးအမူးကုန်ပစ္စည်းများကြောင့်ကျွန်ုပ် ပို၍ အံ့အားသင့်မိသည် ... သို့သော်
Magic Mouse ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်
Mac ကြွက်များကိုများသောအားဖြင့် mouse pad များမပါရှိဘဲအသုံးပြုသည်။
သင်၏ MacBook (Pro / Air) ကိုအေး။ လက်ကောက်ဝတ်များကိုမြှင့်တင်ပါ
အကယ်၍ သင်သည် Apple လက်တော့ပ်ကိုအသုံးပြုပါက၊ အထူးသဖြင့်လူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအရာတစ်ခုကိုသတိပြုမိလိမ့်မည်။
မင်း Magic Mouse နဲ့အဆင်ပြေမလား။
ငါ Magic Mouse နှင့်၎င်း၏ ergonomics ကိုလုံးဝနှစ်သက်သောသုံးစွဲသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။
သင့် iPhone မှဓါတ်ရောင်ခြည်မှသင့်ကိုယ်သင်ကာကွယ်ပါ
အိတ်ဆောင်အသံစနစ် iPod dock ပါသော
ကျွန်ုပ်တို့၏အက်ပလီကေးရှင်းများနှင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအနက်ယနေ့ခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောပြီးပြည့်စုံမှုအကြောင်းပြောပါမည်။
MacBook အတွက် Retro Cover များ
သင်သိသည့်အတိုင်း Mac များအတွက်အပိုပစ္စည်းများစွာနှင့်အမှုကိစ္စများမှာခြွင်းချက်မဟုတ်ပါ။ ဟုတ်တာပေါ့၊
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပြောမည့် iPhone အတွက်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းသစ်မှာ WakeMate ဗတ္တိဇံခံခဲ့သော 'sleep analyzer' ဖြစ်သည်။
Magic Mouse သည် Wireless Keyboard ၏ဘက်ထရီကိုဖြုတ်ပစ်နိုင်သည်
၎င်းသည် Magic Mouse ပိုင်ရှင်များကြိုးမဲ့ကီးဘုတ်ဖြင့်မျှော်လင့်ထားသည့်အရာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းသည် ...
Novanta၊ သင့် Mac ကိုဒီဇိုင်းဆွဲပါ
ဘုရင်များချဉ်းကပ်လာကြပြီးနိုဗန်တာ၏ဤဒီဇိုင်းများကိုကြည့်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည် ၀ ယ်လိုစိတ်မရှိဟုဝန်ခံသည်။
Magic Mouse ထွက်လာကတည်းကမိုးအနည်းငယ်ရွာနေပြီ၊ ဒါပေမယ့်ငါနင့်ကိုမဖမ်းစားနိုင်တော့ဘူး ...
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးဆောင် Mac ကိုအလှဆင်ဖို့ဗီနိုင်းတွေပိုများလာတယ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ MacBook များကို (အံ့ဖွယ်ကောင်းသော်လည်းစျေးကြီးသော) ညှိရန် Colorware ရွေးစရာအပြင်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အမြဲတမ်းရှိသည်။
သင့်ရဲ့ MacBook Pro အတွက် NX Stand
အကယ်၍ သင်ဟာလက်ပ်တော့ပ်အားလုံးသုံးတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုရင်၊ အဲဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ ...
iPod nano နှင့် iPod Touch အတွက် Marware အသစ်များ
MicroShell, EcoSleeve နှင့် EcoRunner မော်ဒယ်များပါ ၀ င်သော Marware ကုမ္ပဏီသည် ...
Mac OS X တွင် DNIe ကိုသုံးပါ
တစ်နေ့ကျရင်ငါကဘဏ္Treာရေးဌာနနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတစ်ခုလုပ်ရတော့မယ်။ Windows အတွက် Virtualize လုပ်ဖို့ကျွန်တော်ပျင်းနေတယ်၊ ​​ဒါကြောင့်ငါ ...
Apple Wireless Keyboard အတွက် Update
Apple Wireless Keyboard အသစ်က Apple keyboard ကိုအနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ခဲ့ပေမယ့်…
Mac အတွက် Roxio Easy VHS to DVD
VHS, Hi8 နှင့် Video8 ရုပ်ရှင်များသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှယုတ်လျော့သွားပြီးနောက်ဆုံးတွင်အရည်အသွေးကျဆင်းသွားသည်မှာဝမ်းနည်းစရာပင်။
Mighty Mouse vs. မှော်ကြွက်
ကျွန်ုပ်သည် Mighty Mouse ကိုမကြာခဏ အသုံးပြု၍ ဤစာကိုရေးသည်ဖြစ်သော်လည်းမကြာမီကျွန်ုပ်ချစ်မြတ်နိုးမှုကိုပြောင်းလဲနိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
Magic Mouse နှင့် Wireless Keyboard သည် ၀ င်းဒိုးတွင်လုံးဝအလုပ်မလုပ်ပါ
မျှော်လင့်ရမည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Apple ကဤအသစ်နှစ်မျိုးကိုတင်ပြသည့်အခါ ဦး စားပေးမှာအတိအကျမဟုတ်ပါ။
Magic Mouse ရဲ့အူကြောင်ကြောင်
မနေ့ကငါပြောခဲ့တာကငါ့အတွက် Apple ဟာအလွန်ကောင်းပေမယ့်အက်ပဲလ်ရဲ့အရေးအပါဆုံးပစ်လွှတ်မှုပဲ
အဆိုပါတောက်ပ finish ကိုငြီးငွေ့?
ဖန်သားပြင်၏တောက်ပသောအပြီးသတ်သည်အလွန်ရှင်းလင်းသောလက္ခဏာရှိသည် - ၎င်းကိုအလွန်ကြိုက်နှစ်သက်သည်သို့မဟုတ်မုန်းသည်ဖြစ်စေ။ ပြီးတော့ ...
ပြင်ပမြင်ကွင်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့် MacBook Unibody မှကျွန်တော်အမြဲတမ်းစာရေးနေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော် keyboard ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာအသုံးချချင်သည်။
သင်၏ iPhone သို့မဟုတ် iPod Touch အတွက် Epson Artisan 810 နှင့် 710 ပရင်တာများ
ကုန်လွန်သွားတဲ့စက္ကန့်တိုင်းမှာထောင်နဲ့ချီတဲ့ခေါင်းတွေဟာထုတ်ကုန်အသစ်တွေနဲ့ gadget အသစ်တွေကိုစဉ်းစားနေကြတယ်။ သူတို့မှာရှိတဲ့အရေးပါမှုနဲ့ ...
သင်၏ iPod သို့မဟုတ် iPhone နှင့်လိုက်ဖက်သည့်အလင်းသတိပေးနာရီ
Philips သည် iPhone နှင့် iPod ကဲ့သို့သော Apple gadgets နှင့်လိုက်ဖက်သောဤအလင်းသတိပေးနာရီများထဲမှတစ်ခုကိုဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ ဦး စားပေးချက်များအရအလင်းကိုချိန်ညှိနိုင်သည့် option ကိုပေးသည်။ သိတယ်
iPod Dock ပါသော Yamaha အသံစနစ်များ
PDX-30 နှင့် PDX-50 တို့သည်ပြီးခဲ့သည့် Yamaha အသံစနစ်နှစ်ခု၏ကိုးကားချက်များဖြစ်ပြီး ...
ယခု iPod Nano အတွက် Tru Tune Fine Color နားကြပ်ထွက်လာပြီ
Radius ထုတ်ကုန်များအာမခံချက်ဖြင့် iPod Nano အတွက် Tru Tune Fine နားကြပ်အသစ်များကိုယခုဖြန့်ချိလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
Apple Cinema Display မှဖြစ်သည်။ အပိုင်း 2
ယခင်စာဖြင့်ရေးသားထားသောစာရွက်စာတမ်းကို ဆက်လက်၍ LCD နှင့် LED ဖန်သားပြင်များကိုဆက်လက်နှိုင်းယှဉ်သည်။
Apple Cinema Display မှဖြစ်သည်။ အပိုင်း 1
Apple မှပြုလုပ်သောဤဖန်သားပြင်သည် LED panel များ (Light Emitting Diode) ကိုတပ်ဆင်ထားပြီးတိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။
Gorilla ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် iPhone နှင့် iPod Touch အတွက်ကာဗွန်ဖိုက်ဘာများ
အထူးသဖြင့်ပထမမျိုးဆက် iPod Touch နှင့်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောတင်းကျပ်သည့်အဖုံးနှစ်ခုရှိသည်။
Travel Sound၊ သင်၏ iPod Nano အတွက်စပီကာ
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ TravelSound i85 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ပြပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် FM tuner ပါ ၀ င်သောကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောစပီကာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီနေ့ Mini DisplayPort နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မော်နီတာတွေဟာ CinemaView ပါ
ချိတ်ဆက်ရန်သင့်တော်သော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဗွီဒီယို output စနစ်စတင်ရန် Apple ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် ...
Apple ကလူတိုင်းအတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။ ရိုးရာအဘို့, ပြီးပြည့်စုံသောကီးဘုတ်
ဒီကီးဘုတ်သည်ရိုးရာအလေးချိန်ကိုသယ်ဆောင်ထားသော်လည်း ၄ င်း၏ကြိုးမဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊
ယခု iPod Touch နှင့် iPhone OS 3.0 Beta တွင် Voice Memo ရွေးစရာရှိသည်
iPhone OS 3.0 Beta ကို iPod Touch 2G အတွက်၎င်း၏ဗားရှင်းတွင်ဖြန့်ချိသောသူများအတွက် ...
XStand, သင့် Mac အတွက်ကထိက
Mobis Technologhy သည်၎င်း၏မိုဘိုင်းရပ်ကွက်များတိုးချဲ့ရာတွင်အလွန်ကောင်းသောအကြံဥာဏ်ရှိသည်။
မောက်စ် (သို့မဟုတ်မောက်စ်) နှင့်အက်ပလီကေးရှင်း၊
သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောလက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဒီဇိုင်းသည်« XY ရာထူးအညွှန်းကိန်း ... အဖြစ်လူ - စက်ကြားဆက်ဆံရေးတိုးတက်စေရန်ရှာကြံသည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းတစ်ခုပေါ်လာသည်။
MacBook Unibody အတွက် InCase Hardshell လက်များ
InCase သည် Harshell ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုအသစ်အဆန်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းအမှန်တရားသတင်းရောက်ရှိခဲ့သည်။
iPhone အတွက် Bluetooth headset ကို Apple Store မှဖြန့်ချိမည်
Logitech စပီကာများပါ ၀ င်သော iPod နှင့် iPhone များကိုကောင်းစွာတပ်ဆင်ထားသည်
Logitech Pure-Fi Express Plus သည်အသံအရည်အသွေးကောင်းမွန်စေရန်နှင့်အခြားအရာများအတွက်အဓိကအရည်အသွေးတစ်ခုမှာဘက်စုံအသံချဲ့စက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သောအချိန်ကာလကပထမဆုံး Macintosh ကွန်ပျူတာ၏ ၂၅ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရေတွက်ရန်စတင်ခဲ့သည်။
iPod နှင့် Shuffle အတွက်နားကြပ်ထဲ၌ရှိသည့်ချစ်ပ်ပါသောအကြပ်အတည်းအတွက်ပြုလုပ်ထားသည်
Apple ကုမ္ပဏီသည် iPod Shuffle နှင့်နားကြပ်များကို ...
Altec Lansig သည် iPhone အတွက်စပီကာ inMotion MAX ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်
Altec Lansing ကုမ္ပဏီမှ inMotion MAX အသစ်ကိုကောင်းမွန်သောဒစ်ဂျစ်တယ်အသံစနစ်ဖြင့်လော်စပီကာအသစ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားတင်ပြခဲ့သည်။
Apple LED Cinema Displays နှစ်ခုကိုကိုင်တွယ်ပုံအပိုင်း ၂
Apple LED Cinema Displays နှစ်ခုကိုကိုင်တွယ်ပုံ၊ အပိုင်း ၁
Apple LED Cinema Display ယူနစ်၏နည်းပညာဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများကိုသိပြီးနောက်“ အသေးစိတ်များ ...
သင်၏ Sennheisser MM50 ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပါသို့မဟုတ် iPhone မူရင်းကို CX300 သို့ပြောင်းပါ
ဘလော့စ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်မူရင်းနားကြပ်ကိုမိုက်ခရိုဖြင့်ပြုလုပ်ရန်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိသည်။
မင်းလိုချင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာမင်းရဲ့ iMac ကိုအားသွင်းပါ
ဒီခရစ်စမတ်၊ Mac နှင့် Apple သုံးစွဲသူများသည်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းကြီးများကိုရွေးချယ်ရန်အတွက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
Sonic သက်ရောက်မှု i-Fusion2ခရီးဆောင် Hi-Fi စပီကာ
Neodymium conductor များဖြင့်အရည်အသွေးမြင့်မားသောစံနှုန်းများဖြင့်တီထွင်ခဲ့ပြီးအလူမီနီယမ်ပုံသဏ္conာန်များဖြင့်အေးစက်သည်။
သင်၏ Mac အတွက်လူမီနီယမ် mousepad
Apple Simpsons ရဲ့ပြဇာတ်မှာ Apple ယဉ်ကျေးမှုကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်ရယ်မောတယ်၊
တေးဂီတကိုနှစ်သက်သူများနှင့်သစ္စာရှိသောအသံသည် Apple သည်နောက်ဆုံးတွင်စတင်ခဲ့သည်ကိုသိရှိရ။ ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။
IPod နားကြပ်များ၊ Bluetooth iMuffs
သင်၏ iPod နားကြပ်များသည်ပြုတ်ကျတော့မည်မဟုတ်
အသံအရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ iPod နှင့်အတူစက်ရုံမှလာသည့်နားကြပ်များသည်အထူးသဖြင့်မဟုတ်ပါ။
Logic3သည် iPhone နှင့် iPod Touch များအတွက်ဘက်စုံသုံးစပီကာများကိုထုတ်လွှတ်သည်
i-Station Rodate ဟုခေါ်သော Dock + Speaker အသစ်၏အမည်မှာ iPhone နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ဖို့လိုတယ်။ အသုံးပြုသူတစ်ယောက်သည် iTunes Store မှ MacBook အသစ်မှရုပ်ရှင်ငှားသည်။
iMac အတွက် Apple Wireless Keyboard အသစ်
ပြီးခဲ့သည့်လက iMac အတွက်အလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအလွန်ပါးလွှာသောကီးဘုတ်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်တူညီသောအချိုးအစားနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များဖြင့်ကြိုးမဲ့ဗားရှင်းကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
Time Capsule အဖြစ်လေဆိပ်အစွန်းရောက်
ငါပြောမယ့်အစား Time Capsule ထားတာကပိုပြီးလှတယ်ဆိုတာငါတို့အားလုံးသိတယ်။
iRing - iPhone ကို iPod အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းပြelegantနာကိုပြေပြေလည်လည်ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်
iPhone, iPhone 3G နှင့် iPod Touch အကြောင်းအနည်းငယ်သာသိသူသို့မဟုတ်အားလုံးသိကြသောသူအားလုံးသည်ပြproblemနာကိုသိသည်။
U-charge, portable Mac များအတွက်အပိုထပ်ဆောင်းအားသွင်းစက်။
Appleisimo ကကျွန်တော်တို့ကို Laptops တွေရဲ့ဘက်ထရီတွေကိုလွတ်လပ်စွာအားသွင်းနိုင်အောင်ကူညီပေးမယ့် U-Charge ပါဝါ adapter ကိုအကြံပြုပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကို multitouch trackpad (အိမ်လုပ် TactaPad) ပြုလုပ်ပါ။
သင့်တွင် Apple လက်ပ်တော့ပ်အသစ်တစ်ခုမရှိပါကလက်ချောင်းနှစ်ချောင်း အသုံးပြု၍ multitouch အနည်းငယ်သာရှိပါသည်။
Mighty Mouse ကိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းသည်သင်ထင်သည်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းသီးကြွက်များ၏အားနည်းချက်များအနက်တစ်ခုဖြစ်သည့် BlueTooth နှင့် ...
iPhone မှ Mac ကိုထိန်းချုပ်ပါ
iPhone သို့မဟုတ် iPod Touch မှ Mac ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းသည်ကြီးမားသောရွေးချယ်စရာများကိုဖွင့်ပေးမည့် option တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါ…
ကောလဟလ: 802.11n နှင့်အတူ AirPort Express နီးကပ်ပါလိမ့်မယ်။
AppleInsider တွင်၎င်းတို့သည်ဆွစ် AppleStore တွင်အောက်ပါတို့ကိုတွေ့ခဲ့ရကြောင်းအစီရင်ခံသည် -“ အင်တာနက်နှင့်ချိတ်ဆက်ပါ၊ ပုံနှိပ်ပါ၊ တေးဂီတကိုမျှဝေပါ။
MacBook Air အတွက် Cool အဖုံးများ
Be.ez သည် MacBook Air အတွက်အဖုံးအသစ်များကိုတင်ပြခဲ့ပြီးအလွန်ကောင်းမွန်လှသည်၊
တကယ်ကောင်းတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့တယ်၊ သူတို့ကဘာတွေလဲ၊ ဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ခါမှနားမလည်ခဲ့တဲ့အိုင်ကွန်အချို့ကိုနားလည်စေတယ်။
OneLessDesk - Mac အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်
မကြာသေးမီကကျင်းပခဲ့သော MacWorld 2008 တွင် Heckler Design ကုမ္ပဏီသည် OneLessDesk ကိုပုံတွင်မြင်ရသည့်အတိုင်းတင်ပြခဲ့သည်။